जीवनसाथीका लागि धेरै नै भाग्यशाली हुन्छन् यी ३ राशिका युवती, तपाईको कुन ? - Sakaratmak Soch
हाम्रो आसपास केहि यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन्, जसले आफ्नो जीवनको मुस्किल भन्दा मुस्किल परिस्थिति पनि हल गर्छन् । यिनीहरुलाई देखेर मनमा यो कुरा आउन सक्छ कि यिनीहरुमा त्यस्तो के गुण छ त ? ज्योतिषशास्त्रका अनुसार केहि राशिका व्यक्तिहरु हुन्छन् जसको भाग्य निकै बलियो हुन्छ। यतिमात्र होइन यिनीहरुको भाग्यको असर उनीहरुको जीवनसाथीमा पनि पर्छ।
संसदमा ओलीलाई प्रचण्डले सोधेका २१ प्रश्न
जे जस्तो भएपनि ठिकै छ भन्नु पर्छ किनकी यहाँ दुखमा साथ दिने भन्दा बढी मजाक उडाउने गर्छन मान्छे – प्रेरक भनाईहरु